Nduku na-eto eto nke mpaghara Novgorod - magazin "Potato System"
Onu ogugu: mmadu 618703, ihe dika 30% bu ndi bi n'ime obodo.
Ọnọdụ ala: mpaghara ahụ dị na mgbago ugwu ọdịda anyanwụ nke akụkụ Europe nke mba ahụ, ọ bụ akụkụ nke North-West Federal District.
Ihu igwe: ikuku na-emebi emebi, dị nso na mmiri. Rationgba mmiri gabiga ókè, udu mmiri na-adị jụụ, oge ọkọchị na-adịghị ekpo ọkụ, oge mgbụsị akwụkwọ na-ekpo ọkụ, oge oyi dị nro. N'oge oyi, igwe ojii na-enwekarị thaws na-ehiwe na mpaghara. N'oge ọkọchị, ọ na-enwe mmiri ozuzo, ọ na-abụkarị obere oge (kwa ọnwa ruo ụbọchị iri na abụọ ruo ụbọchị iri na abụọ ruo ụbọchị iri mmiri). N’oge mgbụsị akwụkwọ, igwe-oji na-adị ogologo oge (ụbọchị 12-17 kwa ọnwa), oke na-emetụta oke mmiri ozuzo, na Nọvemba na-enwekarị ụdị mmiri mmiri.
Ogologo ikuku ikuku kwa afọ bụ + 4,9 ° С. A na-ahụ iru mmiri kachasị elu n'oge mgbụsị akwụkwọ-oge oyi, na Nọvemba-Disemba ọ ruru 88% kachasị. Ubochi nke nkpuru ikpeazu na opupu ihe ubi bu 18 Mee, nkpuru mbu na udu nmiri bu 18 Septemba. Ogologo oge nke oge ntu oyi bụ ụbọchị 143.
N'oge oge uto (ụbọchị 175), mmiri ozuzo 400-430 mm dara (60% nke usoro kwa afọ). Oge ọkọchị (oge site na t n'elu + 10 Celsius С) na-ewe ụbọchị 140. A na-eguzobe mkpuchi mkpuchi snow site na etiti Disemba (ụbọchị mbụ bụ November 11) ma na-ewe ụbọchị 110-120.
Ahụ efe ahụ. N'ebe ọdịda anyanwụ nke mpaghara ahụ, enwere nnukwu ụlọ ala dị larịị nke Priilmen, ịdị elu ya anaghị agafe 60-70 m karịa oke osimiri. N'ebe ọwụwa anyanwụ bụ Valdai Upland nwere oke ndị mmadụ n'otu n'otu nwere oke dị elu ruo 300 m. E kewara akụkụ abụọ a iche iche na ụdị enyemaka dị obere. A na-akpọkarị nke a n'ime Valdai Upland.
Ala. Sod-podzolic soils na-emeri n'ógbè ahụ, mgbe mgbe ọ na-agba mmiri mmiri ruo mgbe dịgasị iche. Ihe ngosi ha di iche bu ike di nkpa nke elu aruble, acidity na abawanye, ihe ndi di n’ime ha na enyere ha aka.
Mpaghara ala ubi: 703,3 puku ha.
Mpaghara Novgorod bụ otu n'ime ndị isi na Northwest Federal District na mmepụta nduku. Mmepe nke mpaghara a na-eme ka ọ dị mma site na ala kacha mma na ọnọdụ ihu igwe na ịdị nso na ahịa ndị bara uru. A na-ahụta ịmị mkpụrụ nduku dị ka ihe kacha baa uru na ụlọ ọrụ na-eto eto. Nweta uru sitere na 25 ruo 45%. Dị ka o kwesịrị ịdị, olu nke mmepụta nke poteto na-eto eto kwa afọ. Ka anyị chetara gị na na 2000, naanị 160-180 puku tọn "achịcha nke abụọ" toro na mpaghara Novgorod. Na 2015, ndị na-emepụta ugbo nke mpaghara ahụ mepụtara ihe karịrị 368 puku tọn nduku, nke bụ 20% karịa ma e jiri ya tụnyere nsonaazụ nke afọ gara aga (gụnyere oke owuwe ihe ubi na ụlọ ọrụ ugbo na-amụba site na 87%, na ugbo ugbo - site na 85%) Ya mere, maka onye ọ bụla bi na mpaghara Novgorod n'afọ a, e nwere kilogram 595 nke nduku na ọnụego nke 95 n'arọ.
N’ozuzu, mmepụta nduku n’ime afọ ise gara aga etoala ugboro 1,7.
Maka mmepe dị mma nke ịkọ ugbo na ịbawanye ụba nke ndị na-emepụta ugbo, nkwado steeti dị mkpa. A na-enye usoro nke nkwado dị otú a na usoro nke mmemme Steeti nke mpaghara "Development nke agro-ụlọ ọrụ mgbagwoju nke mpaghara Novgorod maka 2014-2020" na mmemme nke ngalaba nduku "Mmepe nke nduku na-eto ma na okike nke ngwa agha (n'ùkwù na nkesa) maka ebe a na-echekwa, nkwadebe tupu ere na ire nduku, akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi na mkpụrụ osisi. Mpaghara Novgorod maka 2014-2016. " N'okpuru mmemme ndị a, ndị na-emepụta ihe ubi nke mpaghara na-enweta ntinye ego maka ịzụta na mmepụta nke mkpụrụ nduku, ịzụta akụrụngwa maka nchekwa, nkwadebe tupu ere na ire nduku, akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi.
A na-emepụta ihe ndị dị mkpa a na-eme na mpaghara iji mee ka a na-akọpụta poteto dị elu .. Ugbo ugbo nke Ivan Geletey, Sergey Yakovlev nke si na mpaghara Borovichi gosipụtara ezigbo nsonaazụ; Anatoly Lipatov, Denis Pavlyuk, Ivan Piraev sitere na mpaghara Novgorod. Mmepụta n'ime ha ruru 500 n'arọ / ha.
A na-enwetakwa ego dị elu na ịkọ mkpụrụ nduku kwa afọ na ugbo Vladimir Kondranin, Arbi Kadyrov si Shimsky District, Nikolai Kolesnikov si Soletky District. A na-ahazi nrụpụta ọrụ n’ime ụlọ ọrụ ndị a na ọkwa nke 250-280 kg / ha.
A na-emejuputa oru ohuru maka imeputa poteto na ala ohuru a. Na mpaghara Volotovsky, Novgorod nduku Sistem LLC kụrụ narị hekta 100 na afọ a, na-enwe mkpụrụ 300 c / ha. N’afọ na-eso, ụlọ ọrụ ahụ na-ezube ime ka mpaghara ọdịda ya dị hectare 300. Na mpaghara Solet, Bristol LLC kụrụ mkpụrụ akụ dị hekta 460, mkpụrụ a ruru 350 c / ha. Atụmatụ ịbawanye mpaghara ahụ ruo hekta 1200. Mgbe ha ruru ogo okike, olu nke mmepụta mkpụrụ nduku ga-abụ puku ton 163.
Maka nchekwa, nkwadebe tupu ire ere na ire nduku na mpaghara ahụ, e wuola ogige mgbagha atọ (abụọ na Novgorod na otu na mpaghara Borovichi), nke nwere ike ịfe karịa 45 puku nduku. Nke a na-enye anyị ohere ịnye ọnụọgụ mpaghara ihe ngwaahịa dị mma kwa afọ, na-ebunye nduku ọhụrụ na-echekwa ma na-ere ha na mpụga mpaghara, nke nwere ezigbo mmetụta na ego ndị na-emepụta. Ka ọ na-erule ngwụsị afọ a, a ga-ekenye ebe a na-akụ nduku ọhụrụ nwere ikike nchekwa 5,1 puku na mpaghara. N’afọ 2016, a na-eme atụmatụ iwu ụlọ nchekwa nduku abụọ na Solet na Shim nwere ikike nchekwa puku 30 puku.
Mmepe nke nduku na-eto eto agaghị ekwe omume na-enweghị nnukwu mkpụrụ ihe onwunwe. Na mpaghara Novgorod, etinyerewo nnukwu ahịhịa mkpụrụ osisi ise.
Ugbu a ụlọ ọrụ na-emepe emepe. N'afọ a, okpuru nduku na-akụ ahịhịa na-eto eto ji pasent 8 mụbaa (ma e jiri ya tụnyere ọkwa 2014).
Akparamagwa na ugbo a ga emeputa ihe kariri nari puku abuo nke nkpuru ezi nkpuru. Nzọụkwụ ọzọ ga-abụ ịmepụta nke ụlọ nyocha mkpụrụ akụ na-enweghị nje.
Atọ abụọ ọrụ aka muta oru nke ugbo profaịlụ na Institute of Agriculture and Natural Resources nke NovSU na-aga nke ọma na-arụ ọrụ na Novgorod mpaghara. Ha na-enye mpaghara ndị ọrụ ruru eru. Kwa afọ, ndị a agụmakwụkwọ njikọ enọ diplọma banyere 400 ọkachamara nke abụọ ọrụ aka akwụkwọ na 50 ọkachamara nke elu ọrụ aka mmụta, ọtụtụ n'ime ndị gụsịrị akwụkwọ na-aga n'ihu ha ọrụ eme na-eduga ugbo oru nke mpaghara.
Ebumnuche bụ isi nke mpaghara dị n'ọhịa bụ ị nweta oke nri nke ndị bi na ngwaahịa Novgorod. Na nke a, ntuziaka na-eto eto nduku nwere ike bụrụ ihe nlere maka ndị ọzọ. Mpaghara a enweelarị onwe ya zuru oke na nduku taa. N'afọ na-abịa ọ na-zubere na-emepụta 400 puku tọn nduku, na e nwere obi ike na ọrụ a bụ n'ezie na ezi solvable.
Na mpaghara a nwere amụma na saịtị itinye ego maka mmepe nke mpaghara dị iche iche, ụfọdụ n'ime ha achọlarị n'ihi ihu igwe dị mma maka ịmepụta mpaghara na mpaghara ahụ.
Ndị editọ ahụ na-ekele Ngalaba Ọrụ Ugbo na Nri nke Novgorod Mpaghara maka ịkwadebe ihe omume ahụ.
Nduku na-eto na mpaghara Tula